ဆံ နွယ် စိတ္တဇ – Hlataw Entertainment
ဆံ နွယ် စိတ္တဇ
May 29, 2021 By admin News
ပိုင်း(၁) ထွန်းခင်သည် ငယ်ငယ်ကတည်း ကဆံပင်ကိုစွဲလန်းစိတ်ရှိသူ တယောက်ဖြစ်သည်. ဘယ်လောက်တောင် စွဲလန်းလည်းဆိုရင် အိမ်နီးနားမှာ ရှိတဲ့ ဆံပင်ရှည် မိန်းကလေးတွေ ​ခေါင်းလျှော်​ရေချိုးနေတာ တွေ့ရင်သူ့မှာ ဆံပင်ရှည်တွေကို ခိုးခိုးကြည့်​ပြီး စိတ်မှန်းဖြင့် ဂွင်းထုရတာကို နှစ်သက်နေမိကာ ကြာလာတော့အားမရတော့ဘူး ဖြစ်နေတော့သည်. ထိုအခါအိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ ဆံပင်ရှည် မိန်းကလေးတွေ အိမ်ကိုအလည်သွားပီး သူတို့ဆံပင်အကျွက်တွေကို သူတို့မသိအောင်လိုက်ရှာယူပြီး အိမ်ရောက်ရင်ဆံပင်ရှည်အကျွတ်တွေကို နမ်းပီးဂွင်းထု ရတာပိုကြိုက်လာတယ်. အိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ ဆံပင်ရှည်မိန်းကလေးကိုလည်း အမြဲစားဖို့ ချောင်းနေတော့လေသည်. ဒါနဲ့ထွန်းခင်က တက်စီ ကားမောင်းတာလေ မိဘတွေ မရှိကြတော့ဘူး. တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီးလည်းဖြစ်သည်. ထွန်းခင်ကားကို ဆံပင်အရှည်ကြီးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ ငှားစီးတဲ့နေ့များဆိုရင် ထွန်းခင်စိတ်ရိုင်းတွေဝင်​လာပြီး တနေရာရာ ကိုခေါ်သွာပြီး ဆံပင်အရှည်ကြီးကို စိတ်ထဲရှိတာ လုပ်ပစ်လိုက်ချင်​တော့တယ်.
ဒါပေ​မဲ့ ခက်တာက ထွန်းခင်မှာနေ​ရာ မရှိဘူးလေ. အဲ့တော့ ထွန်းခင်ဘဝက ဆံပင်ရှည် အကျွတ်တွေ ရှာလိုက်ဂွင်းထု လိုက်နဲ့ပဲ စိတ်ဖြေနေရတော့သည်. ဒီလိုနဲ့ တနေ့ကြတော့ ထွန်းခင်ကိုလူတယောက်လာရှာတယ်. “ဟေ့. ထွန်းခင်ရေ…..” အိမ်ရှေ့ကနေ ရပ်ကွက်လူကြီးဦးအေမောင်ခေါ်တာနဲ့ “ဗျာ….ဦးလေးအေးမောင်. အေးဒီမှာ မင်းကိုရှေနေ့ တယောက်လာရှာလို့ လိုက်ပို့တာ…”ဟုပြောပြီး လူတယောက်ခေါ်လာလေသည်. “အော်….ဒီကဦးလေးက ကျွန်တော့ကို ဘာဖြစ်လို့ လိုက်ရှာတာလည်းမသိဘူး”ဟုထွန်းခင်က အိမ်တံခါးဖွင့်ရင်းမေးမြန်းလိုက်သည်. “ဒီလိုပါငါ့တူ…. မင်း ဦးဝင်းဇော်ကိုသိလား”ဟု တိုက်ပုံအမည်းရောင်နှင့်လူကမေးလိုက်သောအလာ ထွန်းခင်တချက် စဉ်းစားလိုက်ပြီး “​သိတယ်လေ ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ ညီလေ.ဦးလေး ဘာဖြစ်လို့လဲ. ကျနော်နဲ့တောင် မတွေ့တာအတော်ပြီ”်”အေး ဟုတ်တယ်. သူဆုံးသွားတာတနှစ်လောက်ရှိ​ပြီ. သူ မကွယ်လွန်ခင် မင်းကိုရှာခိုင်းပြီး အိမ်တစ်လုံးနဲ့ ဘဏ်မှာအပ်ထားတဲ့ပိုက်ဆံသိန်းတစ်ရာကို မင်းကိုပေးပါလို့ ဦးကိုမှာခဲ့တယ်. မင်းအရင်နေခဲ့တဲ့ နေရာမှာ သွားရှာတာ မင်းပြောင်းသွား​ပြီတဲ့. အခုတောင် ဒီနေရာကို တော်တော်ရှာလိုက်ရတယ်.
ကဲ….ဒါက အိမ်စာချုပ်၊ ဒါကဘဏ်စာအုပ်”ဟုထွန်းခင်အား ကမ်းပေးလိုက်သည်. ထိုရှေ့နေ့မှဆက်၍ “အိမ်ကတော့ မှော်ဘီမြို့ အစွန်မှာနေချင် လည်းနေ မနေချင်ဘူး ဆိုလည်းပြန်ရောင်းလိုက်ပေါ့ကွာ” ဟုဆက်ပြောလေသည်. ထိုနောက် “မင်းဒီနေ့အားရင် ဦးလေးလိုက်ပြမယ်”ဟုပြောလေသည်. ထွန်းခင်မှ “အားတယ်ဦးလေးသွားကြမယ်”ဆိုပြီးအားရဝမ်းသာပြောလိုက်တော့သည်. ထွန်းခင်ဘဝတော့ နေ့ချင်းညချင်းကို ပြောင်းလဲသွားလို့ မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေ​တော့တယ်….. မှော်ဘီကအိမ်ကိုရောက်တော့ ထွန်းခင်အရမ်းပျော်သွားတယ်. ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ထွန်းခင်အရမ်းလိုချင်တဲ့ အိမ်မျိုးဖြစ်နေလို့ပဲ. အိမ်ကနှစ်ထပ်တိုက်အကျယ်ကြီးဖြစ်သည့်အပြင် ဘေးမှာလည်း ဘာအိမ်မှာမရှိဘူး အေးအေးချမ်းချမ်း တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ရှိလှသည်. ထွန်းခင်အရမ်းကြိုက်သွားကာ ငေးမောနေစဉ် ” ကဲ ငါ့တူ ဘယ်လိုလဲ မောင်ထွန်းခင်ပြန်ရောင်းမှာ လာနေမှာလား”ဟုရှေ့နေက မေးလိုက်သည်. ထွန်းခင်လည်း “ပြန်တော့မရောင်းပါဘူး.ဦးလေးပေးထားတဲ့ အမွေလည်းဖြစ် ကျွန်တော်လည်း အိမ်ငှားနေရတာဆိုတော့ ဒီမှာပဲလာနေမှာပါ”ဟု ပြုံးရင်း ပြန်ပြောလိုက်သည်.
​ရှေ့နေကြီးမှသူ့အလုပ်ကိစ္စများပြီး၍ “အေးအေး…ဒါဆိုလည်း ပြန်ကြမယ်​လေ ဦးလေးအလုပ်နဲနဲရှိ​​သေးလို့” ဆိုရင်းကားပေါ်တတ်လိုက်တော့သည်. “ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေးပြန်ကြတာပေါ့”ဟုဆိုကာ ကားမောင်းထွက်လာတော့သည်. ထွန်းခင်တယောက် သူ့စိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော်ရတော့မယ် ဆိုပြီးမြူးထူးနေတော့သည်…..
အပိုင်း(၂) ထွန်းခင်က ကားသမားဆိုတော့ အသိအကျွမ်းက ပေါတယ်မလား. မကောင်းတဲ့သူရော ကောင်းတဲ့သူရောရှိတယ်. တရက်ကျတော့ ထွန်းခင်လည်း ဘော်ဒါတယောက် အဆက်အသွယ်နဲ့ တို့ဆေးကိုမနဲ လိုက်ရှာဝယ်လိုက်တယ်. ​ပြီးတော့အိပ်ဆေးပါဝယ်ပြီး ရေသန့်ဗူးထဲကို ဆေးထိုးအပ်နဲ့ အိပ်ဆေးများထိုးထည့်ထားကာ ကားထဲမှာထည့်ထားလိုက်သည်.
ထွန်းခင်လည်းလက်ထဲငွေရှိပြီဆိုတော့ အရင်မောင်းတဲ့ကားကို အုံနာပြန်အပ်ပြီး သိန်းကိုးဆယ်နဲ့ ကားတစီးဝယ်လိုက်သည်. ထွန်း အဲ့နေ့ကစပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြံစည်တော့သည်. ကြံစည်တော့မှ မနက်ကတည်းက တက်စီ ငှားတဲ့လူတွေအကုန်လုံး ယောက်ကျားတွေကြီးပဲ မိန်းကလေးတွေကျတော့လည်း ဆံပင်တိုတိုလေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ထွန်းခင်စိတ်ညစ်​လေတော့သည်. ထွန်းခင်လည်း နာရီကိုတချက်ကြည့်လိုက်ကာ ” ကိုးနာရီကျော်ပြီ ဆိုတော့ အိမ်ပြန်တော့မယ်”ဟုတွေးကာ ကားမောင်းထွက်လာလိုက်တော့သည်. မြေနီကုန်းဒဂုံစင်တာရှေ့ရောက်တော့ မိန်းကလေးတယောက် ကားလှန်းတာနဲ့ရပ်ပေးလိုက်ပြီး ” အကိုကားအားလား” ဟု ချိုသာယဉ်ကျေးတဲ့ အမေးသံလေးကြားလိုက်ရတယ်. “ရပါတယ်ဘယ်ကိုလဲ ညီမ”ဟု ထွန်းခင်ကမေးလိုက်တယ်.
“မြောက်ဒဂုံကို” “၈၀၀၀လောက်ကျမယ်” “၇၀၀၀ပဲထားပါသွားနေကြပါအကိုရယ်”ခပ်ချွဲချွဲလေးပြောတာနဲ့ ထွန်းခင်လည်း “တက်တက်ညီမ”ဆိုပြီး ကားနောက်ခန်းတံခါးလှမ်းဖွင့်ပေးရင်း ကောင်မလေးကို သေချာကြည့်လိုက်တော့မှ ကောင်မလေးက ဆံပင်အရှည်ကြီးပဲ ကုလားဆင်မလေးတော်တော်လည်းချောတာ ကုလားကား ထဲကမင်းသမီးတွေထက်တောင် ပိုချောသေးတယ်.ဆံပင်ကလည်း တင်ပါးကျော်ပေါင်ရင်းလောက်ကို တညီထဲဖြောင့်စင်းမဲနက်နေတာပဲ.ထွန်းခင်လည်း ကောင်မလေးဆံပင်ကိုမြင်ပြီး ရင်ဖိုလှိုက်မောသွားတော့ပြီး စကားစလိုက်တယ် “ညီမကဒီအချိန်ပြန်နေကြလား” “ဘာဖြစ်လို့လဲ​အကို” ကောင်မလေးက ပြန်မေးတယ် . “အော်…ခုနက ညီမပြောလို့​လေ သွားနေကြဆိုလို့ပါ”ဟု ထွန်းခင်လည်း ဘက်မှန်ထဲကြည့်ရင်းပြန်ပြောလိုက်တယ်.
ကောင်မလေးကတချက်ရီလိုက်ရင်း “ခ်ခ်…ရမ်းပြောတာ တခါမှဒီအချိန်မပြန်ဖူးဘူးအကို အခုကသူငယ်ချင်း နေမကောင်းလို့ လာကြည့်ရင်းသူငယ်ချင်းနဲ့ စကားကောင်းနေတာ အခုချိန်မှ ပြန်ရတာ. လိုင်းကားကလည်းမရှိတော့ဘူး အာ့နဲ့ ကားငှားဖြစ်တာအကိုရေ”ဟု ပြန်ရှင်းပြလေသည်. ထွန်းခင်လည်း စကားဆက်လိုက်ပြီး “ဟုတ်တာပေါ့. လိုင်းကားလည်းမရှိ ဒီအချိန် မိန်းကလေးတယောက်တည်း ပြန်ရတာ အန္တရာယ်များတယ်. ပြီးတော့ ညီမလိုဆံပင်အရှည်ကြီးနဲ့မိန်းကလေးတွေက ပိုတောင်သတိထားသင့်တယ်”လို့အေးဆေးစွာပြောလိုက်သည်. “ဟုတ်​တယ် အကိုရေ. ဒီဆံပင်တွေနဲ့ အန္တရာယ်များတယ်. ဘယ်သွားသွား ဆံပင်ဖြန့်သွားတာနဲ့ စားမဲ့ ဝါးမဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ လူကိုလိုက်ကြည့်လိုက်. ပြီးရင် ဆံပင်လေးက ဘယ်လိုလှတာ ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်ချင်တာဆိုတွေရော လိုက်ပြောနေကြတာ. တကယ်စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်. ထားလာတာကြာပြီဆိုတော့ ညှပ်ပစ်ဖို့ကလည်း နှမျောလို့အရှည်ပဲဆက်ထားနေတာ “ဟု ထွန်းခင်အား ပြောပြလေသည်. ထွန်းခင်လည်း တဆင့်တက်ပြီး “ညီမက ဆံပင်ရှည်ထားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ. ညီမဆံပင်က အကိုတောင်သတိထားမိတယ် တော်တော်လေးလှတယ်နော်”ဟု မသိသလိုမေးလိုက်တယ်.
“အင်း ထားတာတော့ ၁၀နှစ်သမီးထဲကပါ. ဆံပင်က ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းတော့​ မပျက်စီးဘူးလေ”ဟုဆိုပြီး သူမဆံပင်တွေကိုရင်ဘတ်ပေါ်ဆွဲတင်ရင်း ပြောလေသည်. ထွန်းခင်လည်း ဘက်မှန်က​နေလှမ်းကြည့်ရင်း အမှောင်ထဲမှာတောင် မဲနက်ပြောင်တင်းနေတဲ့ ပတုန်းရောင် ဆံကေသာတွေကို ငေးကြည့်မိပြီး စိတ်တွေ ကြွလာလေတော့သည်. အဲ့လိုနဲ့ ကောင်မလေးကို တို့ဆေးနဲ့ဘယ်လိုတို့ရမလဲဆို​ပြီး တွေးနေတုန်း “အကိုကျွန်မကို ဆိုင်တဆိုင်လောက်ရောက်ရင် ခဏရပ်ပေးပါလား”လို့နောက်ခန်းမှ လှမ်းပြောလေသည်. ထွန်းခင်လည်း “ဘာဝယ်ချင်လို့လဲ ညီမ”ဟုမေးလိုက်သည်. ကောင်မလေးမှ”သူငယ်ချင်း အိမ်ကနေလောလောနဲ့ပြန်လာတာ ရေသောက်ချင်လို့” ဟုပြောသောအခါ ထွန်းခင်လည်း “ငါ့ဂွင်ထဲရောက်ပြီ”ဟု စဉ်းစားလိုက်ပြီး “အော်…အကို့မှာ ရေဘူးပါကင်ဘူးတွေ ဝယ်ထားတာ​တွေရှိတယ်.အေးတော့မအေးဘူး.သောက်မလားညီမ”ဟုဆိုကာ ဆေးခပ်ထားသော် ရေသန့်ဘူးအားလှမ်းပေးလိုက်သည်.
“ကျေးဇူပါအကို.ရတယ်ရေဆို​ပြီးရော အေးအေးမအေးအေး”ဆိုပြီး ထွန်းခင်ပေးသောရေသန့်ဘူးအား လှမ်းယူလိုက်ကာ “နောက်ကြုံရင် အကိုကားပဲစီးတော့မယ်.ဟဲဟဲ…သဘောကောင်းလို့”ဟုဆိုကာ ရေသန့်ဘူးဖွင့်ပြီး မော့သောက်လိုက်လေသည်. ကောင်မလေး ရေသောက်တာကို ကြည့်ပြီးထွန်းခင် ရင်တွေခုန်နေတော့သည်. ၅မိနစ်လောက်ကြာ​သော် ကောင်မလေးလည်းသန်းလာ​တော့တယ်. ခဏလောက်ကြာတော့ အ်ိပ်​ပျော်သွား​တော့သည်. ထွန်းခင်လည်းသေချာအောင်လို့ ကားရပ်​ပြီး ကောင်မ​​လေးလှုပ်နှိုးကြည့်တယ် “ညီမ ညီမ…” ကျိန်းသေသွား​ပြီကောင်မလေးမနိုးတော့ဘူး ဟုထွန်းခင်တွေးလိုက်ကာ သူမရဲ့ဆံပင်ရှည်ကြီးကို ​ကိုင်ကြည့်လိုက်ပြီး “အား လားလား အိစက်ပြီး ပျော့ပြောင်းနေတာပဲ”ဟုပြောပြီး ကောင်မလေးဆံပင်ကို နမ်းကြည့်လိုက်လေသည်. “ရှန်ပူနံလေး မွှေးနေတာပဲ.ဒီဆံပင်ကြီးကို ကောင်းကောင်းလိုးရမယ်” စိတ်ထဲတွေးပြီး ကားပေါ်ပြန်တတ်ကာ မှော်ဘီခြံကိုမောင်းသွားတော့လေသည်……..
အပိုင်း(၃) ထွန်းခင်လည်း ဆံပင်ရှည်ကြီးကို စိတ်ကြိုက်စားရတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် ရင်ခုန်စွာကားမောင်းလာရင်း မှော်ဘီခြံထဲရောက်လာတော့သည်. ခြံထဲရောက်သည်အထိ ကောင်မလေးက အိပ်ပျော်နေတုန်းပင်ဖြစ်သောကြောင့် ကောင်မလေးရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကို ထွန်းခင်ယူကြည့်လိုက်လေသည်. ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင် သူမပုံနှင့် ဗျူတီးစလွန်း ဝန်ထမ်းကဒ်တစ်ကဒ် တွေ့လိုက်သဖြင့် နာမည်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လေသည်.
“ရတီခြူး ဆိုပါလား.နာမည်လေးကလည်းလှ လူလည်းလှတယ်ကွာ. လတ်စသတ်တော့ ဗျူတီးစလွန်းမှာ အလုပ်လုပ်တာကြောင့် ဒီကောင်မလေးဆံပင် ဒီလောက်ကောင်းနေတာကိုး” ဟု ထွန်းခင်စိတ်ထဲတွေးလိုက်လေသည်. ဒီလိုနဲ့ပဲ အိပ်မောကျနေတဲ့ ခြူးကို ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်ပြီး လက်တွေခြေတွေကို ကုတင်တိုင်မှာ ကြိုးချီထားလိုက်သည်. ခြူးရဲ့ မဲနက်ပျော့အိနေတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကို ကုတင်အောက်မှာ ချထာလိုက်ကာ ထွန်းခင်တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှလည်း “ကောင်းလိုက်တဲ့ ဆံပင်ကြီးကွာ မှောင်နေတာတောင် ပြောင်လက်လေတာပဲ. ငါတော့ အမုန်းဆွဲလိုး ပစ်ရမယ်”ဟု စိတ်တွေထလာကာ အင်္ကျီနဲ့ပုဆိုးကိုချွက်လိုက်ပြီး ထွန်းခင်လီးကြီးက ဘယ်လောက်တောင် စားချင်နေလည်းမသိဘူး ထိပ်မှာတောင် အရေကြည်တွေထွက်နေတော့သည်. ခြူးရဲ့ ဖြောင့်စင်း​နေတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကို နှစ်ခြမ်းခွဲကာ တစ်ခြမ်းကိုယူလိုက်ပြီး လီးမှာပက်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ဂွင်းထုတော့လေသည်.
ပါးစပ်မှလည်း “ကောင်းလိုက်တာကွာ ပျော့အိနေတာပဲ”ဟု ရေရွတ်ပြီး ကျန်ရှိ​နေတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကိုလက်တဖက်ကယူနမ်းက အားရပါးရဂွင်းထုနေလိုက်တော့လေသည်. ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ ထွန်းခင်လည်းမရတော့ပဲ ခြူးရဲ့ခေါင်းအရင်းနားက ဆံပင်တွေထဲကိုသုတ်ရေတွေပန်းထုတ်လိုက်တော့လေသည်. ကိစ္စဝိစ္စ ပြီး၍ သုတ်ရေတွေပေနေတဲ့ ဆံပင်ကို ကုတင်​ပေါ်ကနေ ချထားခဲ့​ပြီး အခန်းထဲကထွက်လာကာ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ဝီစကီထိုင်သောက်ပြီး အမောဖြေနေတော့သည်. ဝီစကီပုလင်းတဝက်ကျိုးတော့ အခန်းထဲပြန်ဝင်သွားလိုက်ကာ ကြိုးတွေပြန်ဖြည်ပြီး ခြူးရဲ့ အင်္ကျီနဲ့ထမိန်တွေ အကုန်ချွတ်ပြစ်လိုက်​တော့သည်. လက်တွေခြေထောက်တွေကို ကြိုးပြန်ချီထားလိုက်ပြီး ခြူးရဲ့ နို့သေးသေးလေးတွေကို လက်နဲ့အုပ်ကာပွတ်တော့လေသည်. နို့လေးတွေ တင်း​ပြီးအညိုရင့်ရောင် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်ချေပေးလိုက်သောအခါ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ခြူးလည်း တချက်တွန့်သွားလေသည်.
ထွန်းခင်လည်း ဆက်ပြီးတော့ ခြူးရဲ့ပေါင်ကြားထဲလက်ထည့်လိုက်ကာ စဖုတ်မို့မို့လေးကိုစမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ အမွှေးရေးရေးလေးတွေအများကြီးကို ခံစားမိလိုက်လေသည်. ထို့နောက် ဆံပင်ရှည်တွေကို ယူလိုက်ပြီး ခြူးရဲ့နို့လေးတွေပေါ်တင်​ပြီး ဆံပင်တွေနဲ့အတူနိုစို့လိုက်တောသည်. “သူ့ဆံပင်တွေမှာ ရှန်ပူနံလေးမွှေး​နေတာပဲ စို့လို့ကောင်းလိုက်တာကွာ… ​ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်… “ဆိုပြီး ထွန်းခင်ကုန်းစို့နေတော့လေသည်. နို့စိုလို့ဝတော့ခြူးရဲ့ အဖုတ်နေရာလေးကို လက်နဲ့ထပ်စမ်းကြည့်ပြီး လက်​ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်နဲ့ ကလိပေးလိုက်ရာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ခြူးရဲ့အဖုတ်လေးကေ အရေကြည်လေးတွေစိမ့်ထွက်လာထွက်လာသည်. အာ့နဲ့ ထွန်းခင်လည်း အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ဆံပင်ရှည်​တွေကို ယူလိုက်ပြီး အဖုတ်ပေါ်တင်လိုက်ကာ “အား …ဆံပင်ကတော်တော်ရှည်တာပဲ ပေါင်ရင်းကျော်တော့ အဖုတ်ထိရောက်တော့ မိုက်တယ်ကွာ”ဟု ဆိုပြီး ဆံပင်ကြားထဲကနေ အဖုတ်ထဲသို့ လီးကိုထိုးထည့်လိုက်တော့သည်. ခြူးလည်းကိုယ်လုံးလေး တစ်ချက် နှစ်ချက်တွန့်သွားပြီး “ဗြိ…ဗြိ… ပလွတ်.. ဘွတ်…ဘွတ်”နှင့် ထွန်းခင်လီးကြီး ရှောရှောရှူရှူ ဝင်သွားတာကို ကြည့်ပြီး “ဒီကောင်မ အတွေအကြုံရှိ​ပြီး​ပြီနဲ့တူတယ်” တွေးလိုက်ကာ ဆံပင်ရှည်​ကြီးကိုတဖန်ပြန်ယူနမ်းပြီး ခြူးကိုလိုးတော့လေသည်.
လိုးနေရင်း ထွန်းခင် အားမရတော့ပဲနဲ့ ခြူးရဲ့ပျော့အိနေတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကို လက်မှာပတ်လိုက်ပြီး ဆံပင်​​တွေအကုန်လုံးကို လက်နဲ့စုကိုင်ပြီး ခြူးရဲ့ခေါင်းလေးမော့လာအောင် ဆောင့်ဆွဲလိုက်ကာ “ဘွတ်….ဘွတ်…ဖတ်…ဖတ်…ဖတ်…ဖြောင်း… ဖြောင်း.. ဖျစ် ..ဖျစ် ဖျစ်” အသံတွေထွက်လာကာ အားရပါးရ ဆံပင်ဆွဲကာ လိုးနေတော့လေသည်. ထွန်းခင်လည်း ကာမသုခကို အပြည့်အဝခံစားပြီး ​ပြီးခါနီးကြတော့ ခြူးရဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးကို အားနဲ့ဆောင့်ဆွဲလိုက်တာ လက်ထဲတွင်တောင် ဆံပင်တွေကျွတ်ပါလာတော့လေသည်. အဖုတ်ထဲတွင်ပဲ ပြီးလိုက်ကာ အဖုတ်ထဲကထွက်လာတဲ့ အဖြူရောင် သုတ်ရေတွေကို သူမဆံပင်နဲ့ယူပြီး သုတ်လိုက်​​လေသည်. ထွန်းခင်လည်းမောဟိုက်သွားပြီး ခြူးရဲ့ဆံပင်တွေကို ကုတင်အောက်ပြန်ချကာပေး ဘေးမှာပဲ အိပ်လိုက်တော့​​သည်…..
အပိုင်း(၄) မျက်စိမှိတ်ထားသော်လည်း စူးဝင်လာတဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် ခြူးတယောက် ခေါင်းမူးနောက်စွာဖြင့် မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ သူမအိမ်မျက်နှာကြက်မဟုတ်ပဲ ပြောင်းလဲနေသည်ကိုထူးခြားစွာတွေ့လိုက်ရလေသည်. မိမိကိုယ်ကို သတိထားကြည့်လိုက်မှ ခြေရော လက်ရော အတုပ်နောင်ခံရထားသည့်အပြင် ခန္ဓာကိုယ် တွင် ဘာအဝတ်မှမရှိပဲ ပြောင်သလင်းခါနေလေပြီဖြစ်သောကြောင့် လွန်စွာထိန့်လန့်သွားလေသည်. ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်သော် ညက သဘောကောင်းသည်ဆိုသော် တက်စီ သမားမှ ကိုယ်တုံးလုံးတီးနဲ့ ပက်လက်အိပ်နေသည့်အပြင် သူ့ရဲ့ လီးကြီးကလည်း ထောင်မတ်နေသည်တွေ့လိုက်ရပြီး ခြူးလည်းကြောက်လန့်တကြား အော်ဟစ်တော့သည်. အော်နေသည့်ကြားကပင် “ငါ ဘယ်လုပ်လုပ်ဒီရောက်နေတာလဲ. ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ. ငါ့အဖုတ်လေးရော ခေါင်းတွေရော ကြိမ်းနေတာပဲ. ဒီလူကြီး ငါ့ကို မတော်မတရားကျင့်ထားတာလား” စသည်ဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ခေါင်းထဲဝင်လာကာ မျက်ရည်များပါကျဆင်းရင် ရုန်းကန်မိတော့သည်. ခြူးရဲ့အော်ဟစ် ရုန်းကန်နေမှုကြောင့် ထွန်းခင်လည်း နိုးသွားတော့သည်.
“ဟာ… ခြူး… နိုးပြီလား… ညက ကုမယ့်ဆန္ဒတွေ ဖြည့်ပေးတဲ့ မင်းကို ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ. ဟား…ဟား..” ရယ်မောကာပြောလေသည်. “လူယုတ်မာ… ရှင်ကျမကိုအခု လွှတ်ပေး. ရှင်…ရှင်… ကျမကိုမတော်မတရားမလုပ်နဲ့ ကျမအော်မှာနော်” “မင်းအော်ချင်သလောက်အော်ကွာ. ဒီနေရာမှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး. မင်းနဲ့ငါ ၂ယောက်တည်းပဲရှိတာ. ဟား…ဟား…ဟား…မင်းကတကယ်လှတဲ့ကောင်မပဲ. မင်းဆံပင်တွေကလည်း သိပ်လှတော့ ငါမင်းကိုလွယ်လွယ်မလွှတ်ပေးနိုင်ဘူး”ဟု ဆိုကာ ကုတင်အောက် ကျနေသော နက်မှောင်နေတဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ဆွဲယူပြီး သူ့ရဲ့လီးကိုပတ်လိုက်ကာ ဂွင်းတိုက်ဖို့လုပ်လိုက်လေသည်. “ကျမဆံပင်ကိုဘာလုပ်တာလဲ. လူယုတ်မာကြီး..ဟီး…ဟီး…ဟီး… ကျမဆံပင်တွေညစ်ပတ်ကုန်ပြီ..”ဟု ကြိုးချည်ခံထားရတဲ့ ခြူးလည်း ငိုယိုတော့လေသည်. “မင်းဆံပင်ကြီးနဲ့ အဲ့လိုလုပ်တာကြိုက်လို့ကွာ.ပြီးတော့ မင်းဆံပင်က ရှည်ယုံတင်မပဲ ပျော့အိနေတာပဲ ပိုကြိုက်တယ်. ပြီးရင် ခေါင်းပြန်လျော်ပေးမှာပါကွာ ဟဲဟဲ”ဆိုပြီး ဆံနွယ်တွေထွေးပိုက်ကာ စိတ်ကြိုက်လိုးတော့သည်.
ပက်လက်လန်နေတဲ့ ခြူးရဲ့ အပေါ်ကို ထွန်းခင် တတ်ခွလိုက်ပြီး ဆံပင်တွေမျက်နှာပေါ်တင်လိုက်ကာ ဆံပင်တွေကြားထဲသို့ သူ့ရဲ့ လီးကြီးကို ထိုးထည့်လိုက်ပြီး ခြူးကို လီးစုတ်ခိုင်းရန် ဟန်ပြင်လိုက်လေသည်. ခြူးလည်း မျက်နှာနားရောက်လာသည့် လီးညိုညိုကြီးကို ကြည့်ပြီး ရွံ့ရှာကာ ပျို့အန်ချင်သလိုပင်ဖြစ်နေတော့သည်. ထွန်းခင်ကလည်း “ငါ့ လီးကိုစုပ်ပေးစမ်း. ကောင်းကောင်းစုပ်ကြားလား. မဟုတ်ရင် နင်ကို အ​သေသတ်ပလိုက်မယ်” ဟု ခြိမ်းခြောက်လေသည်. မဆန့်မပြဲ နှင့် ပါးစပ်ထဲဝင်လာသည့် လီးကြီးကြောင့် ခြူးတယောက်နေရထိုင်ရ ခက်သွားလေသည်. ယခင်က အလိုးခံဖူးသော်လည်း အခုလို လီးမစုပ်ခဲ့ဖူးပေ. ယခင်ရည်းစားဟောင်များကလည်း သူမရဲ့ဆံပင်ကိုသာ အချိန်တိုင်းလိုးနေခြင်းဖြစ်သည်. အခုလီးစုပ်ရတော့မှ ခြူးအတွက် အထူးအဆန်းဖြစ်နေလေသည်.
အဝင်အထွက် မှန်လာသော်အခါ ထွန်းခင်လည်း ခြူးရဲ့ဦးခေါင်းကို ပွေ့ကိုင်ပြီး ပါးစပ်ထဲသို့ အားရပါးရလိုးနေရင်း ပြီးချင်သလိုဖြစ်လာ၍ ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ နဖူးအရင်းမှ ဆံပင်တွေထဲသို့ သုတ်ရည်တွေ ပန်းချလိုက်တော့သည်. နဖူးပေါ်မှ တဆင့်ဦးခေါင်းပေါ်သို့ စီးကျသွားသော သုတ်ရည်ပူနွေးနွေးတွေကို ခံစားမိလိုက်လေသည်. ခြူးလည်း ရုန်းကန်ရန် အားမရှိတော့ပဲ ငိုချင်းသာချနေတော့သည်. ထွန်းခင်လည်း ခြူးကိုယ်ပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး “ငါအပြင်သွားပြီး မနက်စာသွားဝယ်မယ်. ပြန်လာမှ နင့်ကိုကောင်းကောင်းလေး ခေါင်းလျှော်ပေးမယ် ဟဲဟဲ..”ဟု ဆိုတာ ထွက်သွားလေသည်…… အပိုင်း(၅) ထွန်းခင် မနက်စာဝယ်ပြီးပြန်လာလေသည်. ခြူးရဲ့ကုတင်ဘေးဆီ ဝင်လာပြီး ခြူးအား ခြေလက်တွေကို ကြိုးဖြည်ပေးလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် အခွင့်အရေးကို အသုံးချကာ ထွက်ပြေးရန် အိပ်ယာပေါ်ကခုန်ဆင်းလိုက်လေသည်. လူကသာရှေ့ရောက်နေသော်လည်း ဆံပင်ရှည်ကြီးက နောက်တွင်ကျန်ခဲ့သဖြင့် ထွန်းခင်အမိအရလှမ်းဖမ်းပြီး ဆောင့်ဆွဲလိုက်လေသည်.
ဆံပင်အဆွဲခံရသည့် အရှိန်ကြောင့် ခြူးလည်း နောက်ပြန် ဖင်ထိုင်ရက် ကျလေသည်. “ဟာ…. ဒီကောင်မကတော့ သေတော့မှာပဲ လာခဲ့စမ်း. နင်ဘယ်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတာလဲ”ဆိုပြီး လဲနေခြူးရဲ့ ခါးကို ဖက်ပြီး အိပ်ယာပေါ်ဆွဲပစ်တင်လိုက်လေသည်.ခြူးလည်း ​ဆံပင်ဆွဲခံရသဖြင့် နာသွားပြီး အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက်အနေအထား ဖြစ်သွားလေသည်. ထွန်းခင်လည်း သူရဲ့ ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်ပြီး တောင်မတ်နေတဲ့ လီးကြီးကို ခြူးရဲ့အဖုတ်ဝကိုတေ့ပြီး “နင်တော်တော်ယားနေတာလား ကောင်မ. ငါနင့်ကိုအသေလိုးပေးမယ်”ဟု ကြိမ်းပြီး တချက်ထဲဆောင့်ချလိုက်လေသည်. လီးတေ့ပြီး တချက်ထဲအဆုံးထိထိုးထည့်ခံရသဖြင့် ခါးလေးအသားကုန်ကော့သွားကာ ပါးစပ်မှလည်း “အမလေး…. ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါရှင် သေပါပြီ.
ဟင့်….ဟင့်….အား…..နာတယ်….ဟီးဟီး”ဆိုပြီး မျက်ရည်တွေကျကာ အသနားခံလေသည်. ထွန်းခင်လည်း “ဖြည်းဖြည်း လုပ်စေချင်ရင် နင်မရုန်းနဲ့ ငါ့ကိုကလန်ကဆန်မလုပ်နဲ့ ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ် ကြားလား”ဟု ဟိန်းဟောက်သောအခါ ခြူးလည်း ငိုနေရင်း ခေါင်းပြန်ငြိမ့်ပြလေသည်. “ကောင်းပြီ… လေးဘက်ထောက် ဖင်ကုန်းတော့. နောက်ကနေ နင့်ဆံပင်ကိုဆွဲလိုးချင်တယ်ဟာ” ဟု ​ပြောရင်း ခြူးကိုယ်လုံးလေးကိုဆွဲ လှည့်လိုက်လေသည်. ထို့နောက် ခွေးကုန်းး စတိုင်ဖြစ်သွားသောအခါ အောက်ကျနေတဲ့ ခြူးရဲ့ဆံပင်တွေကိုယူလိုက်ပြီး ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်လေး လီးနဲ့ အသာတေ့လိုက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆံပင်တွေကိုစုကိုင်ကာ ဆွဲထည့်လိုက်သည်. “အား…ဟင့်ဟင့်….အင်း…အင်း…. “ခြူးဆီမှ ညီးညူသံ တချို့ထွက်လာလေသည်. ထွန်းခင်လည်း “ကောင်းလား ကောင်မ. နင့်ကိုအဲ့လိုတသက်လုံး ကောင်းကောင်းလေး လိုးပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား. ငါနဲ့တူတူသာနေလိုက်. နင်ကိုရှယ်လိုးပေးမယ်”ဆိုပြီး စိတ်ပြေနပြေ လိုးတော့လေသည်.
တဖြည်းဖြည်း အထုတ်အသွင်း မှန်လာပြီး ထွန်းခင်ရဲ့ အုနှစ်လုံးက ခြူးရဲ့ ဆီးခုံကို တဖတ်ဖတ်ဖြင့် ရိုက်ကာ အတိုင်အဖောက်ညီညီ လိုးကြလေသည်. ထွန်းခင်လည်း ခြူးရဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးတွေကို ဆွဲ၍တမျိုး နမ်း၍တဖုံ မျိုးစုံ လုပ်ကာ စိတ်ကြိုက်လိုးလေသည်. ပြီးခါနီးကျတော့ အဖုတ်ထဲက လီးကိုထုတ်ပြီး ခြူးရဲ့ကျောပေါ်ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဆံပင်ရှည်တွေပေါ်သို့ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်. “ဘယ်လိုလဲကောင်းလား မိန်းမ. အခုချိန်က စပြီး ငါက မင်းယောက်ကျာုးဖစ်ပြီ. ဟား…ဟား….” ကျေနပ်နေတဲ့ လေသံဖြင့် ရယ်မောလိုက်လေသည်. ထို့နောက်မနက်စာစားကြပြီး ခြူးကိုရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်သွားကာ ဆံပင်တွေခေါ်လျှော်ရင်း ထွန်းခင် ထပ်လိုးပြန်သည်. ခေါင်းလျှော်ပြီးတော့လည်း ထွန်းခင် မနားတမ်း တနေကုန် ဆံပင်လိုးလိုက် လီးစုတ်ခိုင်းလိုက်ဖြင့်သာ ကာမစည်းစိမ်ကိုခံစားကြရင်း ပြီးနေတော့သည်. နောင်ဆုံးတော့ ထွန်းခင်တယောက် ဆံပင်ရှည်ကြီးနဲ့ မိန်းမတယောက် နေရင်းထိုင်ရင်း ရသွားပြီး တသက်လုံး ဆံပင်တွေကို စိတ်ကြိုက်လိုးခွင့်ရသွားလေတော့သည်…ပြီးပါပြီ.
ကိုယ့် တိုင်း ရေးး ရင်တွင်း ဖြစ် ကြမ်းကြမ်း
ကြီးလေ ပို ကောင်း လေ